BEERAHA DHIRTA BEERAHA "CABBIRKA RUUSH": SHARAXAADA KALA DUWANAANTA, BEERASHADA IYO DARYEELKA - STRAWBERRIES
Qof kasta oo leh dhulkiisa ayaa inta badan wuxuu tixgeliyaa go'aanka saxda ah ee lagu beerayo strawberries. Beerta cas cas ee casriga ah ayaa si siman u jecla carruurta iyo dadka waaweyn, iyo "cabbirka Ruushka" waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay noocyada kala duwan ee strawberry jecel ee beeralayda warshadleyda gudaha, isagoo ah isugeyn ballaaran oo strawberry ah. Kala duwanaantan ayaa soo jiidata dadka degan xagaaga oo leh muddo dheer oo aad u dheer oo ah fruiting, taas oo joojinaysa oo kaliya bisha Oktoobar, iyadoo hoos u dhigta heerkulka hawada habeenkii.
Waa muhiim! Nafaqeeyayaal waxay kugula talinayaan cunista strawberries si gooni gooni ah cuntada ugu weyn. Xaqiiqdu waxay tahay in berry dhadhankiisu uu keeno halsano caloosha, taas oo si xun u saameeya hawsha nidaamka dheef-shiid kiimikaadana xitaa sabab u noqon kara colka iyo kufsiga.
Qeexida noocyo strawberry "cabbirka Ruushka"
Haddii aad doonayso inaad ku koro strawberries ee "cabbirka Ruush" kala duwan ee beertaada beerta, ka dibna aad, dabcan, waa in ay akhriyaan sharaxaad faahfaahsan. First of dhan, waxaa haboon in la ogaado in dhalidda ee "strawberries" ee "cabbirka Ruush" wuxuu sababaa xishood dhab ah xitaa bannaanka u khibrad leh: inta lagu jiro muddada daaqsinta on duurka u qurxin casiir leh, ballaaran, gaaraya 5 ilaa 8 sentimitir ee berry dhirirka. By habka, miisaanka hal cagaar oo strawberry ah "cabbirka Ruushka", oo ku xiran dhammaan shuruudaha agrotechnical, waxay gaari karaan ilaa 50 g.
Ma taqaanaa? Strawberry waa niyad jab xoog leh. Berry Tani waxaa ku jira qadar fiicnayn oo fitamiino ah oo ka mid ah kooxda B, taas oo ka dhigaysa isticmaalka inay si gaar ah muhiim ugu tahay kuwa ku xanuunsan koritaanka dareenka iyo dareenka. Cabitaanka kaliya 150 garaam oo miro yar oo ah maalintiiba ayaa kaa caawin doona inaad haysato dareenka xun ee la xakameeyo.
Intaa waxaa dheer in wax kasta oo kale, berry ah ee kala duwan ee this leeyihiin hilib macaan oo casiir leh iyo hilib aad u macaan, iyo dhadhanka waxaa lagu xusuustaa by xitaa hammiga dhabta ah. Waxaa la yaab leh, noocyada kala duwan, oo ka duwan dhammaan kuwa kale, waxay ku dhow yihiin waligood inay keenaan dareen-celin xasaasiyadeed, taas oo u oggolaaneysa isticmaalka xitaa carruurta yaryar iyo xasaasiyadaha.
Beerta cawska ee "cabbirka Ruush" waxay ku guulaysatay qalbiyada beerta leh wax soo saarka sare, sababtoo ah haddii aad siisid geedo leh xaalado raaxo leh ee koritaanka iyo horumarka, ka dibna hal geedka waxaad soo ururin kartaa in ka badan 0.5 kiiloogaraam oo ah nooca berry ah oo udgoon.
Sida loo doorto geedo strawberry marka aad iibsaneyso
Marka aad iibsanayso geedo strawberry "cabbirka Ruush", waa muhiim inaad doorato dhirta caafimaadka leh. Boogaha, casaan, madow iyo madow oo ku yaal caleemaha duurka waxay muujinayaan in ay qabaan infekshanka fangas, sidaas darteed waxa fiican in laga fogaado sida iibsigu yahay. Haddii ay duurka ku beeranayaan caleemo shaki leh, ka dibna tani waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa necrosis dhamaystiran ee geesaha. Phytoinfection wuxuu loola jeedaa karantiilaha iyo haddii aad ka iibsanayso wax beerista cudurka, ka dibna geedo ay u badan tahay inuu dhinto. Haddii ay ku jiraan duurka waxaad ka helaysaa caleemaha yar yar, ka dibna tani waa calaamado hubaal ah oo infekshin leh caarada cufan. Cayayaanka Tani waxay si weyn u yareeyaan awoodda la qabsashada iyo dhalidda dhirta.
Ma taqaanaa? Strawberry - dabiici ah "Viagra". Waxay ku dhex jirtaa miraha beeraha zinc ka caawisaa inay kordhiso rabitaanka galmada ee ragga iyo dumarka labadaba. Waxaa intaa dheer, waxay kaloo kordhisaa suurtogalnimada in ilmuhu uuraysto ugu yaraan 25%.
Geedo tayo sare leh ee kala duwan ee Ruushka Cunto kala duwan ayaa leh:
midabka cagaaran ee caleemaha cagaaran;
dhumucda geesaha laga bilaabo 0.7 illaa 0.8 millimitir;
Nidaamka xididdada xardhan (dhererka xididada waa inaanay ka yarayn 7-8 sentimitir);
muuqaal caafimaad leh;
qoyan, aan xididdada la qalajiyey.
Xasuuso in cabbirka beeraha mustaqbalka uu ku xiran yahay tayada geedo la soo iibsaday, sidaas darteed doorashada xulashada alaabta waa in laguula dhaqmaa sida ugu macquulsan.
Marka loo aasayo geedo of strawberries beerta on sawirka
Si aad u hesho cabitaanka Ruush ee roodhida si ay uga raali geliso waxtarkeeda deeqsinimadeeda iyo beeraheeda waxaa lagu sameeyaa iyada oo aan dhacdaba, waa in la xusuusnaado in saldhigyada tayada ugu fiican iyo adegyada ay ka muuqdaan duurka horaanta guga ama xagaaga hore, sababtoo ah inta lagu jiro muddadaa heerkulku aad u sarreeyo oo qoyaankuna waa badan yahay ka badan intii ku filan. Iyada oo ku saleysan baahida duurka strawberry, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in waqtiga ugu habboon ee ku-beddelashada dhulkooda ay tahay muddada u dhexeysa Abriil 15 iyo May 5 ama laga bilaabo 25ka Luulyo ilaa Sebtembar 5. Gobollada koonfureed, beerto duurka xilliga guga waxaa la fuliyaa horraantii Maarso, iyo dhammaadkii - dabayaaqadii October. Dabcan, bisha Agoosto waxaa loo tixgeliyaa inay tahay waqti wanaagsan oo lagu beero duurka.
Tani waa waqtiga ugu wanaagsan ee sababo badan:
waqtigan wax badan oo ah wax soo saar;
cimilada wanaagsan ee ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ee sprouts;
dhirta waxay leeyihiin waqti ku filan si aad u hesho xoog.
Doogyada Strawberry ayaa aad u jecel yihiin iftiin, taas oo macnaheedu yahay in beertooda ay tahay inay doortaan meelo wanaagsan oo iftiinka ah oo basasha, digirta, dalagyada xididka ama toonta loo isticmaalo si ay u koraan.
Waa muhiim! Qodob muhim ah oo saameynaya xajmiga fruiting waa cufnaanta ciidda. Haddii carrada acidic ku badan tahay on your site, ka dibna si loo abuuro shuruudaha ugu wanaagsan ee strawberries sii kordhaya, waxaa lagula talinayaa in aad deoxidize. Ujeedadaas awgeed, maadada ash ama lime waxaa loo isticmaalaa.
Fikrad ahaan, sariirta lagu beerayo strawberries ayaa horay loo doortay: guga waxaa lagu beeray digada cagaaran, kaas oo la gooyey bishii Agoosto, kadibna loola dhaqmo xal diyaar ah EM. Cagaarka cagaaran ee loogu talagalay strawberries waa lupine. Waa isku mid muhiim ah ka hor inta aan laga beerin duurka dhirta duurka goobta si aad u nadiifiso cawska iyo si habboon dhulka loo diyaariyo. Xusuusin: strawberries waa ciriiri daran, marka marka aad diyaarinaysid sariiraha waxaad u baahan doontaa compost, ash, biohumus iyo digada. Wixii geedo diyaariyaan meelo qoto dheer oo ballaaran. Masaafada u dhexaysa godadka waa inaanay ka yaraan 30 ama ka badan 50 sentimitir, iyo inta u dhaxeysa safafku waa inay u dhigantaa 40 sentimitir.
Ka hor inta beeritaanka geedo, isku dar ah nafaqo ayaa lagu daraa ceel kasta, ee loogu talagalay diyaarinta hal baaldi qasacadaysan, hal baaldi, baaldi dhulka ah iyo laba koob oo ash ah oo isku dhafan. Bartamaha meel walba, tuulo yar ayaa laga sameeyey substrate diyaar u ah, kaas oo geedo lagu meeleeyo.
Geedka fidinta strawberry "cabbirka Ruush" ee goobta
Kala duwan ee Strawberry "cabbirka Ruushka" oo aan qabin, laakiin si loo abuuro baadiyaha dhalinyarada ee aadka u guulaysatay, waa inaad sameysaa wax-qabadka maalinta qumman ama fiidkii. Intaa waxaa dheer, si ay duurka si deg deg ah, ka hor transplanting iyaga, waxaa lagama maarmaan ah in ay si fiican u biyo, ama qoyaan geedo ka hor beerashada dhulka laba saacadood oo biyo ah oo lagu daro biostimulator. Sidoo kale, qaar ka mid ah growers geed ka hor beerashada duurka strawberry ee dhulka lagu talinayaa inay ku qoyaan faleebo toon ah oo lagu diyaariyey heer ah 150 milliliters of toonta toonta 10 litir oo biyo ah - urta toon ah oo aan fiicneyn ayaa ka cabsiin doona cayayaanka.
Ma taqaanaa? Cunista strawberries badiyaa waxay kaa badbaadinaysaa madax xanuun waxayna xitaa hoos u dhigi kartaa heerkulka jirka. Waxyaabaha ay tahay in berry ay ka kooban tahay walxo isku mid ah oo ka kooban kiimiimadooda kiimiko ah ee aspirin.
Ka hor inta beerto dhirta dhulka, si taxadar leh u baadha duurka: waa mid macquul ah in mid kasta oo ka mid ahi uu leeyahay 3 ama ugu badnaan 4 caleemo caafimaad leh, iyo inta soo harteyna waa in laga saaraa isla markiiba. Haddii xididdada dhirta dhererkoodu gaaro in ka badan 10 sentimitir, waa in la gooyaa. Hadda waxaannu haynnaa barkad kasta oo ku taala bartamaha daloolka sidan oo wadnaha ah (barta kobaca ee baadiyaha) ay ku degto dusha sare ee sariirta, iyo xididdada dhirta ayaa si fiican loo dhigaa on hillsides. Qaadida qoryaha toosan, kula saydhaa substrate diyaar ah isla markaana isla markaasna ku shub biyo. Tani waxay hagaajinaysaa xidhiidhka xididada dhulka iyo dedejinta dhismaha nacnaca. Marka ay beerto duurka, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in dhibicda koritaanka aan si qotodheeri loogu aabo, laakiin isla mar ahaantaana wax badan ma sara kicin heerka sariirta.
Noocyada noocyo kala duwan oo strawberry ah "cabbirka Ruushka"
Daryeelka strawberries "cabbirka Ruush" ma qaato inta badan waqtigaaga iyo dadaalkaaga. Waayo, raaxada ugu badan ee duurka ku beeray guga, waa inaad si nidaamsan uga saartaa caws ubax iyo boogaha. Ka takhalusidda arrimahaani waxay u oggolaanaysaa in warshadu ay u dirto dhammaan ciidamadeeda si ay u dhidibbada u noqoto, oo aan ahayn samaynta miraha iyo dhalida.
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in dhirta ay helaan qoyaan ku filan iyo quudin, si nidaamsan ula dagaallama caws iyo marmar siibo ciidda, iyo sidoo kale ilaalinta duurka ka cudurada iyo cayayaanka.
Iska ilaalinta cudurrada iyo cayayaanka
Si loo ilaaliyo duurka strawberry ka shilinta iyo cudurada (dhibco madow iyo caddaan, iyo sidoo kale xagta oo budada ah) leh bilawga maalmood ee guga diiran, dhammaan caleemaha saameeyey oo qallalan waa in laga saaraa dhirta.
Mashiinka ugu horeeya waxaa lagu sameeyaa iyadoo la arko raadadka cudurada iyo dhirta duurka iyagoo leh kallana cawl, kareemada budada iyo xagaa guga hore, ka hor inta caleemaha cusub ay koraan, iyaga oo isticmaalaya xal 3% ah ee Bordeaux isku dar ah. Haddii ay duurka u muujiyaan calaamadaha caabuqa leh dhibco cad ama caddaan ah, ka dibna marxaladda koritaanka daaqsinka waxaa lagu buufiyaa Euparen. Inta lagu jiro muddada degdeg ah ee burooyinkeeda, dhirta waxaa lagu daaweeyaa anti-Pyrexia, Galitsa, iyo sidoo kale cayayaanka kale ee cayayaanka by Actellic at heerka of 15-20 ml of diyaarinta 10 litir oo biyo ah. Xilliga dayrta, ka dib goosashada, waxaa lagu talinayaa in lagu shaqeeyo strawberries leh Topaz, Switchem ama Euparine, si loo yareeyo raasamaalka infekshinka, iyo joogitaanka cayayaan cayayaanka, Actellic ah.
Fadhiga iyo badnaantii waraabka
Inta jeer ee lagu waraabiyo strawberries waxay ku xiran tahay xaaladaha cimilada waxaana lagu go'aamiyaa qallajinta ciidda. Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu sameyn karo nidaamkaan waa horaantii subixii. Ilaa ay ubaxa u muuqdaan, duurka waa la waraabin karaa. Ceelka noocan oo kale ah wuxuu u egyahay roobka wuxuuna si fiican u dhaqaa boodhkii uruuriyey maalintii oo dhan caleemaha. Haddii ay aad u kulushahay banaanka, dhirta waa in la waraabiyaa toddobaadkii hal mar, 10 ilaa 25 litir oo biyo ah ayaa lagu shubayaa hal mitir laba jibbaaran. Ka dib muuqaalka miro ah ee duurka u yareeyo waraabinta. Wixii caleenta waraabka ah waxay isticmaalaan biyo diirran, heerkulku uusan ka yarayn 20 ° C. Ku waraabinta strawberries biyo qabow waxay sababi kartaa faddaraynta dhuxusha oo leh caarad budo ah ama caaryada cawl, taasoo keeni doonta geerida dalagga oo idil.
Ilaalinta geedku wuxuu bilaabmaa inuu horseedo abuuritaanka geedo dhulka. Laakiin si looga hortago sariirta sariirta cawska, taas oo ka qaadaya qoyaanka iyo walxaha waxtarka leh xayawaankaaga, waxaa lagama maarmaan ah in ay qaadaan jaridda dhirta oo idil inta lagu jiro xilliga dhirta oo idil iyo ka dib goosashada. Loosashada sariiraha waxaa la sameeyaa sideed maalmood oo kasta. Qoto dheeraanta dabacsanaanta waa inay ahaataa 10 cm, marka cawska laga saaro, waxaa lagu talinayaa ma aha oo kaliya in la goosto, laakiin si aad uga qaadato dhulka iyo nidaamka asaasiga ah, ku ururi baaldi oo ka qaad beerta.
Dharka ugu sareeya ee duurka strawberry
Marka ugu horeysa beerashada strawberries, hordhaca ah ee quudinta waxaa lagu fuliyaa dayrta. Tani waa maareynta muhiimka ah ee duurka uumiga leh. Bacriminta waxay ka caawisaa duurka u soo kabashada waxayna siinaysaa awood si loo adkeeyo jiilaalka. Ka dib markii ay dhammeeyaan fruiting, ku hari ubax foomka on dhirta, sidaas darteed beergooyska mustaqbalku wuxuu ku xiran yahay qadarka nafaqooyinka laga helay heerkan. Intaa waxaa dheer, duurka strawberry waxaa lagu quudin jiray offseason ka dib transplantation, beeritaanka iyo dhalmo by qaybinta duurka.
Digada cusub ama digaaga digaaga ah ayaa la dhigaa inta u dhaxaysa xilliga dayrta ee bacriminta duurka oo leh bacriminta dabiiciga ah, sababtoo ah inta lagu jiro xilliga qaboobaha waxay yeelan doontaa wakhti ay ku wareegsan tahay, gugana wuxuu si siman u adeegi karaa ilaha nitrogen, iyo sidoo kale mulch, ka digto horumarka firfircoon ee haramaha.
Humus waxaa la geyn karaa dhulka iyo inta lagu jiro bedelida duurka: waxay diyaariyaan buste ah, taas oo markaas lagu shubo godadka leh rosettes lagu beeray iyaga. Digada digaaga, cusub, laguma talin, maxaa yeelay waxay keeni kartaa xidid gubasho sababtoo ah xoogga nafaqada sare. Wixii quudinta dhirta waa in la qasi karaa biyo. Xalka waxaa la soo geliyey grooves qoday godadka iyo safafka strawberries.
Guga, bacrinta waxaa lagu fuliyaa ka dib markii ugu horreyntii foosha. Muddadan, natiijooyinka wanaagsan waxaa soo saarey hirgelinta digada digaagga ee la kariyay. Si aad u diyaariso xalka, qayb ka mid ah digaagga ayaa la qaadaa waxaana lagu qasi karaa 20 qaybood oo biyo ah. Si kastaba ha ahaatee, laguma talinayo in la isticmaalo dharka noocan oo kale ah marar badan sanadkii, sababtoo ah hordhaca xad-dhaafka ahi wuxuu gacan ka geysanayaa raasamaalka Nitrates ee ciidda, taas oo markaa dhicin doonta dhirta oo aadan helin dalagyo deegaanka ah oo saaxiibtinimo leh.
Quudinta labaad waxaa la fuliyaa ka dib muuqaalka berry ah. Ujeedooyinkaas isticmaal, isticmaal Doodwanaag liin, sida uu u tixgeliyo bacriminta ugu habboon ee strawberries. Korovyak waxay ku jirtaa tirada saxda ah dhammaan nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah horumarinta caadiga ah ee strawberries. Si aad u diyaarsato cunto noocan oo kale ah waxaad u baahan tahay inaad qaadato rubuc ka mid ah baaldi duufaan leh oo ka buuxi biyo, qaso oo qoyi meel diiran ilaa 3 maalmood. Faa'iidada keentay, kahor intaan la bilaabin, waxaa lagula talinayaa in lagu dhufto saamiga 1: 4 oo kaliya markaa u isticmaal inaad ku shubtid duurka.
Intaa waxaa dheer in ay organic, for bacarimiso ay duurka strawberry guga, isticmaalka iyo Bacriminta macdanta. Ammofosc iyo ammonium nitrate waxay ku fiican yihiin doorka heerka 2: 1. Isku darka soo baxa waxaa lagu qasi karaa biyo waxaana lagu mudayaa ciidda.
Nidaamka ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'strawberries', inta lagu jiro dhismaha berry, waa potassium, sidaa daraadeed waa in la hirgeliyaa arrintan waa in la fuliyaa inta lagu jiro ubaxyada duurka. Wixii quudinta dhirta, waxaad isticmaali kartaa monophosphate potassium at heerka of 1 qaado oo ah 10 litir oo biyo ah, laakiin hordhaca ah ee Bacriminta ciidda waa in la fuliyaa ka dib markii waraabiyo badan oo duurka. Qoyaanku wuxuu ka ilaaliyaa xididdada dhirta gubashada kiimikada.
Geedo kori karo strawberries "cabbirka Ruush" ee abuurka
Growers badan ayaa ka baqaya in ay dalbado abuur, sababtoo ah ma ay yaqaan sida loo beeray strawberries si habboon. Iyo waxtarla'aan! Geedo si habboon u koray abuurka ah ayaa kala duwan fruiting deeqda badan, iyo, marka lagu daro, waxay si buuxda u haysaa astaamaha varietal ah. Dhibaatada ugu weyn ee geedo strawberry sii kordhaya abuurka ah waa in ay miro ay leeyihiin jaakad aad u cufan, taas oo ah wax aan macquul ahayn in la jebiyo iyada oo aan lahayn stratification dheeraad ah.
Hoyga, abuurka waxaa lagu meeleeyaa jawi qoyan waxaana lagu naqshadeeyaa qaboojiyaha oo heerkul fiican leh.
Si aad u ururiso abuurka strawberry ee aad u baahan tahay:
soo qaado midhaha ugu weyn, tan ugu quruxda badan iyo bislaaday ee ka yimaada dhirta caafimaad leh;
gooyaa caarada miro (dhirta ugu xooggan waxay ka soo baxdaa miraha laga helay saddexda dhexe ee berry);
gooyaa lakabka ugu sarreeya ee dhoobada si wadajir ah uguna qallajiso xaashida;
massa qalajiyey waa inay si taxadar leh u xadidaan si ay u sii daayaan abuurka;
Diyaargarowgu wuxuu helay alaab uu ku shubo boorsada warqadda ama weelka oo u dir xayeysiis.
Wixii abuurka ah ee Gagaab, waxay u naqshadeeyeen ugu yaraan laba bilood. Ka hor inta aan la gelinin qaboojiyaha, wax soo saarka waxaa lagu daaweeyaa xal xashiishadda potassium, taas oo lagama maarmaan u ah jeermiska iyo quudinta potassium: abuurka waxaa lagu duubaa bacad ah dhar ah oo lagu meeleeyay weel leh kaneecada. Ka dib markaa, miro ayaa lagu beeray substrate peat ah oo lagu meeleeyaa qaboojiyaha. Inta lagu jiro caleenta, waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah u hawo abuurka iyo ku rusheey biyaha.
Dhammaadka dhamaadka dhirta miraha, bisha Maarso waxaa lagu beeray substrate ka hor intaan ka koobneyn qaybo siman oo ah dhulbe iyo dhul wareeg, iyo sidoo kale qadar yar oo ciid ah.
Weel kasta waxay dhigtaa hal shinni, ku buufin biyo leh dhalada buufin, daboolay bireed iyo meel diiran. Toddobaad ka dib, waxaad yeelan doontaa caleemaha ugu horreeya ee caan ah. Marxaladdan, dhirta ayaa u baahan doonta inay bixiso qadar ku filan iftiinka UV. Ka dib markii ay soo baxaan waraaqaha caleemaha (illaa 5 cm dhexroor), waxay ku darsan yihiin weel wayn. Sida ugu dhakhsaha badan geedo gaari karo size size, waa adag tahay iyo beeray dhulka.
Strawberries waa warshad aan qabin, laakiin waxaad weli tahay inaad sameyso dadaal aad ku heli karto goosashada deeqsinimo leh ee miro iyo casaan macaan.